Ndizakuhlala ubusuku bonke ndiseta kwakhona umjikelo wam wokulala-iBikeHike
Ndiwuseta njani kwakhona umjikelo wam wokulala ngobusuku?
Ngaba ndimele ndihlale phezulu ukuba andikwazi ukulala?
Ngaba ubusuku obunye bungonakalisa ishedyuli yakho yokulala?
Ngaba ukutsala ubusuku bonke ukulungisa ishedyuli yakho yokulala?
Uwuqhawula njani umjikelo ombi wokulala?
Ngaba kubi ukufumana kuphela iiyure ezi-4 zokulala ubusuku bonke?
Ngaba ukulala phantsi ngamehlo avaliweyo kubalwa njengokuphumla?
Kuthatha ixesha elingakanani ukuchacha kubusuku bonke?
Ngaba i-melatonin ingawuseta kwakhona umjikelo wokulala?
Ndiyiseta njani kwakhona iwotshi yomzimba wam?
Ngaba zonke ubusuku zimbi?
Ngaba kufuneka uhlale imini yonke ukulungisa ishedyuli yokulala?
Ndizilungisa njani ukuhlala ubusuku bonke?
Ngaba ukuvuka rhoqo ngeeyure ezi-2 kuqhelekile?
Ndiwuqhawula njani umjikelo wokuvuka kwangoko kakhulu?
Kutheni ndivuka qho ebusuku ngentsimbi yesithathu ekuseni?
UElon Musk ulala iiyure ezingaphi?
Ndingalala njani iiyure ezisi-8 kwiiyure ezi-2?
Ingaba iiyure ezi-5 zokulala zingcono kunokungabikho?
Iingcebiso ezili-10 zokusetha kwakhona ishedyuli yakho yokulala Lungisa ixesha lakho lokulala, kodwa yiba nomonde. Musa ukulala, nokuba uziva udiniwe. Musa ukulala, kwaye uvuke ngexesha elifanayo yonke imihla. Yiba ngqongqo ngokunamathela kucwangciso lwakho lokulala. Kuphephe ukuvela ekukhanyeni phambi kokuba ufune ukulala. Kuphephe ukutya okanye ukwenza umthambo xa usondele kakhulu ngaphambi kokuba ulale.
Ukuba akulali, ukozela kwakho kuya kuqhubeka kusiba mbi de ube ekugqibeleni uphumle. Ukulala i-1 ukuya kwiiyure ze-2 kunokunciphisa uxinzelelo lokulala kwaye kukwenze uzive ungadinwa kakhulu kusasa kunokuba kungenjalo ngokuhlala ubusuku bonke.
Emva kobusuku obungaphumliyo abantu bacinga ukuba banokubuyisela ubuthongo obulahlekileyo ngokulala kwangethuba baze balale ngosuku olulandelayo. Oku ngokuqinisekileyo kunceda abantu bazive bephumle, kodwa uphononongo olutsha lufumanisa ukuba ubusuku nje obunye bokungalali buchaphazela kakubi imetabolism kunye neewotshi zebhayoloji zeselula.
Izangqa ezimnyama, iingxowa phantsi kwamehlo, ukuzamla rhoqo, kunye nomzabalazo wokugcina amehlo akho evulekile konke kunokulindelwa xa utsala ubusuku bonke ukulungisa ishedyuli yakho yokulala. Kodwa, ngaphaya kweziphumo ezicacileyo, zexesha elifutshane emzimbeni wakho, ukuhlala ubusuku bonke kunokuba nemiphumo yexesha elide kumzimba wakho.
Apha siza kuquka ezinye iindlela zokuseta kwakhona ishedyuli yakho yokulala ukuba uva ngathi isingqisho sakho sicimile. Bona ukuKhanya kwasekuseni. Ukuzivocavoca ama-3-4 amaxesha ngeveki. Lungisa iShedyuli Yakho Kancinane. Kuphephe ukukhanya okuBlue phambi kokulala. Musa ukuthatha i-Naps. Kuphephe Ukutya Phambi Kokulala. Yamkela iNdlela yokuPhumla ngexesha lokulala. Thatha uhambo lwasenkampini.
Abantu abalala ngaphantsi kwe-7 kwiiyure ezicetyiswayo ukuya kwiiyure ezisi-8 ngobusuku kunokwenzeka ukuba bahlupheke kwiimeko ezingapheliyo ezifana nesifo senhliziyo, ukutyeba, ukudakumba, isifo seswekile kunye nengqondo, uFu kunye nezinye iingcali zithi.
Nangona ukuphumla ngamehlo akho evaliweyo akuwuqalisi umjikelo wakho we-REM kwaye kukuvumela ukuba ubambe ixesha elithile lokulala, kusabonelela ngeenzuzo ezinkulu. Ukuvala amehlo kuthomalalisa ingqondo yakho kwaye kuphumze izihlunu kunye namalungu akho. Abaninzi babhekisela kuyo ngokuthi "ukuvuka okuthe cwaka".
Ikwangumbono olungileyo ukufumana ubuncinane iiyure ezisi-7 ukuya kwezisi-8 zokuphumla ngobusuku ngabunye. Oku kuya kunceda umzimba wakho ubuyele kwishedyuli. Kusenokuthatha iintsuku okanye iiveki ukuba umntu aphinde aphulukane nokungalali ngokwaneleyo. Iyure nje enye yokulahleka kokulala idinga iintsuku ezi-1 ukuze iphinde ibuyiselwe.
Ubungqina obuvela kuphando oluncinci lubonisa ukuba izongezo ze-melatonin zinokunceda ukusetha kwakhona umjikelo wokuvuka. 7kwaye uphucule ubuthongo kubantu abane-jet lag. Abasebenzi beShift - abantu abasebenza ebusuku - bahlala besokola nobunzima bokulala obunxulumene nesingqisho esijikelezayo esingalunganga.
Apha ngezantsi kukho iingcebiso eziluncedo zokukunceda usete kwakhona iwotshi yomzimba wakho kwaye wonwabele i-shuteye yakho. Kuphephe ukukhanya okuluhlaza ebusuku. Lawula ukulala kwakho. Sukulala ebhedini uvukile. Seta i-alam. Yakha indawo efanelekileyo. Yiphephe ikofu. Zilolonge yonke imihla. Zibekele Ucwangciso.
Ukuhlala ubusuku bonke kubi kwimpilo yakho yomzimba kuba kukwenza ungalali ngokwaneleyo. Ukungalali ngokwaneleyo kunye nokulala ubusuku bonke kunokunciphisa ukuxhathisa komzimba wakho kwisigulo kunye nosulelo. Umgangatho ophantsi wokulala kunye nokungabikho kokulala kwandisa ingozi yakho (3): Uxinzelelo lwegazi oluphezulu.
Khetha ixesha lokulala kunye nexesha lokuvuka. Hlala kula maxesha yonke imihla, nangeempelaveki okanye ngeentsuku zokuphumla. Zama ukunqanda ukuhlala okanye ukulala ngaphezulu kweyure enye ukuya kwezimbini. Ngokulandela ishedyuli eqhelekileyo, iwotshi yakho yangaphakathi inokuphuhlisa inkqubo entsha.
Ukuba kufuneka uhlale ubusuku bonke, la macebiso alandelayo anokukunceda ukwenze ngokukhuselekileyo. Ziqhelise. Eyona ndlela ilula yokuhlala ubusuku bonke kukusetha kwakhona iwotshi yakho yangaphakathi. Icaffeine. Kodwa ziphephe iziselo ezinamandla. Thatha ukulala kancinci. Phakama ushukume. Fumana izibane eziqaqambileyo. Sebenzisa izixhobo zakho. Thatha ishawa.
Uninzi lwethu luvuka izihlandlo ezithathu ukuya kwezine ebusuku ngenxa yezizathu ezahlukahlukeneyo, yaye oku kugqalwa njengenxalenye yendlela eqhelekileyo yokulala. Nangona kunjalo, uninzi lwethu luvuka rhoqo, ngamanye amaxesha rhoqo kwiiyure ezimbini ukuya kwezintathu ebusuku. Esi sisizathu sokuxhalaba.
Indlela yokuyeka ukuvuka kwangoko kakhulu ukwenza umthambo rhoqo. ukuphepha i-caffeine kunye nezinye izinto ezivuselelayo emva kwemini (1 okanye 2pm) ukuthintela ukukhanya kwigumbi lakho kwaye uligcine lizolile, limnyama, kwaye likhululekile. ukugubungela umboniso kwiwotshi yakho kunye naziphi na ezinye izibane ezincinci (okanye eziqhwanyazayo) kwigumbi.
Ukuba uvuka ngo-3 am okanye ngelinye ixesha kwaye awukwazi ukuphinda ulale kwakhona, kunokuba ngenxa yezizathu ezininzi. Oku kubandakanya imijikelo yokulala elula, uxinzelelo, okanye iimeko zempilo eziphantsi. Ukuvuka kwakho ngo-3 am kusenokuthi kwenzeke ngokungaqhelekanga kwaye kungabikho nto inzulu, kodwa ubusuku obuqhelekileyo obunje bunokuba luphawu lokuphuthelwa.
Kwimbonakalo yamva nje kwi-podcast yamava kaJoe Rogan, u-Elon Musk uthe ulala malunga neeyure ezintandathu busuku ngabunye-ngemfuneko, kungenjalo umsebenzi wakhe uyasokola. Olo kwamkelwa nguMusk oqhutywa yidatha yeyona nto iphambili kumseki okanye umphathi weshishini kufuneka ayithathele ingqalelo.
Nangona kunjalo, ezi ndlela zilandelayo zinokukunceda ukuba udlule kwixesha elifutshane lokungalali. Zilolonge kancinci. Gwema ixesha lesikrini kwiyure ngaphambi kokulala. Gcina izikrini kunye nezinye izinto eziphazamisayo ngaphandle kwegumbi lakho lokulala. Qinisekisa ukuba igumbi lakho limnyama. Ukunciphisa i-caffeine. Yitya ukutya okunempilo. Kuphephe ukusela utywala.
Ngamanye amaxesha ubomi bubiza kwaye asilali ngokwaneleyo. Kodwa iiyure ezintlanu zokulala kwimini yeeyure ezingama-24 azonelanga, ngakumbi kwixesha elide. Ngokophononongo luka-2018 lwabantu abangaphezu kwe-10,000, amandla omzimba okusebenza ayehla ukuba ubuthongo abukho kuluhlu lweeyure ezisixhenxe ukuya kwezisibhozo.
Ngaba Ukuhlala ubusuku bonke useta kwakhona umjikelo wakho wokulala
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba Ukuhlala Usete kwakhona uMjikelo wam wokuLala
Ngaba Ukuhlala uPhakathi konke kunokuseta kwakhona uMjikelo wakho wokuLala
Umbuzo: Uwuseta njani kwakhona uMjikelo wokuLala ngobusuku obunye
Umbuzo: Ungawuseta njani kwakhona uMjikelo wakho wokuLala ngobusuku obunye
Ngaba i-Xanax iyakwazi ukuSeta kwakhona uMjikelo wokuLala
Umbuzo: Ngaba iMelatonin ingawuseta kwakhona uMjikelo wokuLala
Impendulo ekhawulezayo: Ngaba unokuseta kwakhona uMjikelo wakho wokuLala
Umbuzo: Ngaba iNaps useta kwakhona uMjikelo wakho wokuLala
Ngaba ukuzila ukutya kuseta kwakhona uMjikelo wakho wokuLala
Umbuzo: Lingakanani ixesha lokuseta kwakhona uMjikelo wokuLala
Umbuzo:Useta njani kwakhona uMjikelo wokuLala ngokukhawuleza
Post Previous: Umbuzo: Ngaba uMjikelo omnye weTestosterone uyakukulimaza
Okulandelayo Post: Impendulo eKhawulezayo: Zeziphi iihotele onokuthi uzibone iBhola iwa eNyc